Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सप्तरीमा यस वर्ष ७ प्रतिशत धान उत्पादनमा बृद्धि हुने अनुमान – Emountain TV
सप्तरी, २० मंसिर । सप्तरीमा यस वर्ष ७ प्रतिशतले धान उत्पादनमा बृद्घि हुने अनुमान गरिएको छ । धान उत्पादन हुने ७० हजार हेक्टर जग्गा मध्ये यस वर्ष ८३ हजार ५ सय हेक्टर जग्गामा खेती भई ७ प्रतिशत धान उत्पादन बृद्घि हुने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीले जनाएको छ ।
कतिपय जिल्लामा प्रतिकुल मौसम र बिउका कारण धान उत्पादनमा गिरावट आइरहेका बेला सप्तरीमा भने यस वर्ष ७ प्रतिशतले धान उत्पादनमा बृद्घि हुने अनुमान गरिएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीका अनुसार गत अर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जिल्लामा ५६ हजार हेक्टर जग्गामा मात्र धान खेती भई १ लाख ५४ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो ।
यस वर्ष उत्पादन क्षेत्र बृद्घि भई ६३ हजार हेक्टर जग्गामा खेती भई १ लाख ७९ हजार ५ सय ५० मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने सम्भावना छ । सप्तरीका किसान दुई हप्ता देखि धान काटन व्यस्त छन् । धान काटने, झार्ने, दाइँ गर्ने, गहुँ तथा दलहन बाली लगाउने लगायतको काममा व्यस्त यहाँका किसान धान उत्पादनबाट खुसी छन् ।
तराईका जिल्लाहरु धान उत्पादनको भण्डार हो । कहिले खडेरी, कहिले राम्रो बीउको अभावका कृषकहरुले आशातित उत्पादन लिन नपाइरहेका बेला सप्तरीका कृषकले धान उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी लिन सक्ने आशा राखेका छन् ।
कार्तिक देखि मंसिरसम्म यहाँका किसान खेतीपाती कार्यमा अति व्यस्त रहने गर्छन् । किसानलाई धान काट्ने चटारो परिरहँदा कतिपय ठाउँमा धान काट्ने श्रमिक नपाउँदा समस्या हुने गरेको छ । गाउँका अधिकांश युवा रोजगारीका लागी विदेशिदा युवा जनशक्तिको अभावले बाली भित्र्याउन समेत किसानलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।